इलाम निषेधाज्ञामा कडाई, कुन कुन पसल अथवा ब्यबसाय खोल्न पाइने? पूरा पढ्नु होला । | Khabar Sadan खबर सदन
Home समाचार इलाम निषेधाज्ञामा कडाई, कुन कुन पसल अथवा ब्यबसाय खोल्न पाइने? पूरा पढ्नु...
इलाम निषेधाज्ञामा कडाई, कुन कुन पसल अथवा ब्यबसाय खोल्न पाइने? पूरा पढ्नु होला ।
जिल्लामा कोराना संक्रमणको जोखिम उच्च भएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञामा थप कडाई गरेको छ। सिडिओ ध्रुवबहादुर खड्काले सोमबार आदेश जारी गर्दै जिल्लामा आउँदो २५ गतेसम्म निजी, सार्वजनिक यातायातका साधन, पसल, बजार सबै बन्द गर्न आदेश जारी गरेका हुन्।
मंगलबारदेखि लागू हुने निषेधाज्ञामा खाद्य पसलसमेत बन्द गर्ने आदेश गरिएको छ। यसअघि तरकारी, फलफूल र खाद्य सामग्रीका पसललाई निश्चित समय तोकेर खुला गरिएको थियो। तर, सोमबार जारी आदेशमा तरकारी, फलफूल र दूध विक्री गर्ने पसललाई बिहान ५ देखि साढे ७ बजेसम्ममात्र खुला रहन दिने भनिएपनि खाद्यान्न पसलसमेत खुला नहरने उल्लेख छ। ‘आउँदो २५ गतेसम्मलाई अब खाद्यान्नसमेत सोमबार नै जोहो गर्नुपर्नेछ,’ सिडिओ खड्काले नागरिकसँग भने, ‘औषधि पसलबाहेक सबै क्षेत्र बन्दको आदेश गरिएको छ।’
प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा मेची राजमार्गबाहेक जिल्लाका सबै क्षेत्रमा यातायातका साधन चलाउने नपाइने, खोप केन्द्र जाँदा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकाय, संस्थान तथा कार्यालयले प्रदान गर्ने अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ। निजी बैंक, वित्तीय संस्था र सेवासमेत हाललाई स्थगित गरिएको छ। परीक्षार्थीले परीक्षा दिन जाँदा सोझै परीक्षा केन्द्रसम्म र घरसम्म फर्किनेबाहेक अन्यत्र हिँडडुल गर्न बन्द गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।
यसअघि गत १५ गते प्रशासनले आउँदो २५ गतेसम्मलाई निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। तर, केही खुकुलो रहेको निषेधाज्ञा मंगलबारदेखि लागू हुने गरी कडा बनाइएको हो। जिल्लामा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढेपछि स्थानीयले ‘कडा’ बन्द गर्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् दबाब दिइरहेका छन्।
जिल्लामा आइतबार साँझसम्म कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ३ हजार ५ सय ९ पुगेको छ । यीमध्ये ९ सय ८६ जना सक्रिय संक्रमित छन् भने २ हजार ४ सय ४८ जना निको भइसकेका छन्। ७५ जनाको निधन भएको छ । सक्रिय संक्रमितमध्ये ९ जना इन्टेन्सिभ केयर युनिट (आइसियु) र ८ जना सामान्य उपचारमा छन् भने ९ सय ६९ जना होम आइसोलेसनमा छन्।
Previous article“आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार, हुने, कुन पार्टीलाई कति जना मन्त्री ?
Next articleएन्फा प्रवक्ताबाट राईको राजीनामा
मदिरा व्यवसायीले मदिरा पसल खोल्न दिन माग, नदिए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी, कहिले खुल्छ...
वीरगंजका मदिरा व्यवसायीले व्यवसाय संचालन गर्न दिन स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन्। वीरगंजमा पछिल्लो समय कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणतर्फ गइरहेकोले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर...